Metoo Silicone Light PJS-PY002W - China Xiamen PJS Teknolojia
√.Healthy sady tsy misy fitaka ara-nofo: nitondra Baby Kids Night Light Me toorabbit ny ABS silicone faly manome mikasika malefaka, Mahatsapa malefaka. Fito afaka miova loko mba hanangana ny fanovana tsikelikely ny malefaka silicone color.Through ambonin'ny, ny mazava toa malefaka sy mafana.
√.Long Time namana: Naorina-in 500mAH Lithium bateria manohana ny fampiasana ny portable, mafana mavo fahazavana manazava ny 3 ka hatramin'ny 5 ora. -Dia aminareo lalandava ho an'ny nandritra ny alina manontolo, mamorona ny aina sy sasatra atmosphere.Cozy Childrens alina fahazavana mba hampitonena ny ankizy natory koa.
√.Sensitive induction: nitondra Baby Nursery Lamp Naorina-in tadin vaovao sensor Chip, Sokafy ny base fahefana jiro, ny voalohany fotsy nitifitra mafana mazava (malemy fahazavana), ny faharoa dia ny enina gadona-loko loko-miova fomba, ny fahatelo mitempo foana mamirapiratra, Vonoy ny fahazavana ho an'ny andro fahefatra, Pat indray, avy amin'ny fomba jiro.
√.Correct asa: anjara-raharaha iray feno (5V / 1A) maka ny 2 ora. Rehefa mamaly ny, ny mena pamantarana Manazava izy, fa mamaly ny mamarana, maitso pamantarana mazava.
√.Usage Ohatra: Ny nitondra Baby Nursery jiro Azo ampiasaina araka ny ankizy efitra fatoriana alina jiro, fa afaka ihany koa toy ny sisim-pandrian nursery mazava, zazakely kilalao jiro, efitra fatoriana ankizy decoration.Powered misy saim-petsy USB seranana, toy ny solosaina, biraonao , solosaina, fahefana banky.
EXW Price: US $ 6.77- $ 7.22 / farantsa
Zintin'aratra DC 5V / 1A
Karazana bateria Naorina-in 500mAh Li-Ion bateria
Herin'aratra Lithium bateria
mamaly ny fotoana adiny 2
miasa Time 8-20 ora (miankina amin'ny ny famirapiratry ny mazava)
Test Standard AK RoHS saa TUV ETL
asa 1.7 Color Manova
Fonosana 1pcs / boaty, 48pcs / baoritra
ny fanomezana tanteraka Andron'ny mpifankatia / Noely / Taom-baovao ho an'ny tia, namana, ray aman-dreny, ny ankizy
USB fa mamaly ny tariby Eny
Fandefasana Weight (kg) 0.5
Color efajoro (MG) 105 * 115 * 135
Carton efajoro (cm) 59 * 49 * 30 (16.5kg / Ctn)
Previous: Puppy Dog alina Light PJS-PN
Next: Micro Plant Landscape alina hazavana PJS-TW-L18
80W nitondra Oliver Corn Light
100W nitondra Corn Light
15W nitondra Corn Light
Paraffin Flats labozia PJS-L003
Motion Sensor alina Light PJS-OVNI